YEYINTNGE(CANADA): Saturday, July 26
ရွှေလီမြို့မှာ တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး အနေနဲ့ အခုလို ချိတ်ဆွဲထားတာပါ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/26/20080အကြံပြုခြင်း
Dagon Net တောလား
Jul 26th, 2008 by admin
စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းပြည် အကြီးကဲဆိုသူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ ဇနီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့ တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူပြည်သားများကို အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျသည်မှာ ကမ္ဘာအသိပင်ဖြစ်သည်။
ယမန်နေ့ အင်တာနက်သတင်းအရ တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူ ပြည်သားများ၏ ချွေးနည်းစာ များကို အေးဓားပြတိုက်သူ နောက်တစ်ဦးအကြောင်း သိလိုက်ရသည်။ အကြင်သူမှာ အခြား သူစိမ်းမဟုတ်ပါ။ မိဘခြေရာ နင်း ၍ ပြည်သူကို ဆော်ကားနေသူတစ်ဦး ဖြစ်သည့် သမီးတော် ဒေါ်ခင်သန္ဒာရွှေ ဆိုသူဖြစ်သည်။
ဒေါ်ခင်သန္ဒာရွှေသည် ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမ (အင်ဗွိုင်းခန်းမ)တွင် မတ်လ ၃ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် မြန်မာ့ ပရိဘောကကုန်စည်ပြပွဲတွင် လာရောက်လေ့လာပြိး အဖိုးတန် မြန်မာ့ကျွန်းသစ်ဖြင့် ထုလုပ်ထားသည့် ပန်းပု ရုပ်ထုလက်ရာများ အပါအဝင် အခြား အဖိုးတန် ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ အေးဓါးပြတိုက်သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အဆိုပါ ပစ္စည်းများ၏ ကာလတန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ 10,000 ကျော်ခန့်ရှိမည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဒေါ်ခင်သန္တာရွှေ၏ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မင်္ဂလာပွဲတွင် ဝတ်ဆင်ထားသော စိန်ထည်ပစ္စည်းများကိုမည်သို့ရရှိသည်ကို မှန်းဆကြည့်က ပြည်သူများ၏ ချွေးနည်းစာမှ အေးဓါးပြတိုက်ထားသော သူခိုး …
ကြည့်ချင်အုံးဟဲ့ စလောင်း . . .
Jul 24th, 2008 by admin
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကိုပြူးသွားစေတာက ရန်ကုန်မှာ စလောင်းနှစ်စဉ်ကြေးတွေ တိုးကောက်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။ မြန်မာလို့တွေလိုက်တာနဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို သေသေချာချာတောင် မဖတ်လိုက်တော့ ဘယ်နှစ်ဆ တက်သွားလဲဆိုတာ သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ လိုက်ဖတ်ကြည့်တော့ တစ်နှစ်ကို အရင်က ၆,၀၀၀ ကျပ်ပေးနေရတာကနေ အခု ၁၀ သိန်းတောင် တိုးကောက်လိုက်တယ်တဲ့။ တက်သွားတဲ့နှုန်းက ၁၆၇ ဆ ဆိုလားပဲ။
ဘာမှ တရားဝင် ကြေငြာခြင်းမရှိဘူးလို့ရေးထားတာဖတ်လိုက်ရတယ်။ တရားဝင် မကြေငြာတာကတော့ မဆန်းပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ဆက်ရေးထာားသေးတယ်။ ဘာလို့ဈေး အဆမတန် တင်လိုက်တာလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်ကလူတွေ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတင်းတွေကို မကြည့်စေချင်လို့ပါတဲ့။
စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းတုန်းက စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လူတွေတင်မက မြန်မာပြည်ထဲက လူတွေပါ အလွယ်တစ်ကူ ကြည့်လို့ရနေတာမို့နဲ့တူပါတယ်။ ဒီလိုတင်လိုက်တော့ တော်ရုံတန်ရုံလူတွေ စလောင်းတွေ ဖြုတ်ကြတော့မှာပေါ့။ ဒီလောက် စီးပွားရေးတွေ ကြပ်တည်းနေတာ ဘယ်သူက တစ်နှစ် ၁၀သိန်းပေးပြီး ကြည့်မှာလည်း။ နှစ်ပေ စလောင်းရဲ့ ကဒ်ကတောင်မှ တစ်နှစ်ကို ၁၀သိန်းမပေးရဘူး။
လူတွေ အရင်ကလိုပဲ ပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုးနဲ့ တပ်ပြီး ကြည့်ကြရတော့မှာပေါ့။ ရပ်ကွက်ထဲက ရဝတ လိုလူတွေတော့ စားပေါက်တွေ ပွင့်တော့မှာပေ့ါ။ လိုင်စင်မရှိပဲ ကြည့်လို့ မိရင် လာလုပ်မလဲတော့ မသိဘူး။ ပစ္စည်းသိမ်းရုံလောက် ဆိုရင်တော့ လူတွေ သိပ်မှုကြမယ်မထင်ဘူး။
ရွှေနိုင်ငံကြီးက ဘုရင်ရူး ရူးနေတဲ့ ရွှေဦးနှောက်ပိုင်ရှင်ကြီးတွေရဲ့ ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်မှုကို ကြည့်ကြ မြင်ကြရသေးတာပေါ့။
“မှန်လှပါ၊ သင့်မြတ်လှကြောင်းပါ ဘုရား” လို့ဘယ်သူတွေက အော်ကြအုံးမှာလဲ . . .
ဒီအပါတ် တနင်္ဂနွေညနေကနေ နေပူတော်ကို ကားနဲ့သွားပီး ဒီနေ့ အင်္ဂါနေ့ မနက်ကြီးမှာ ကားနဲ့ ပြန်ရောက်သဗျို။
နေပူတော်ကိုရောက်နေတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေတော့ မတွေ့ခဲ့ရဘူး(အဟိဟိ:P ရှာမတွေ့ဘူး၊ တမျိုးမတွေးနဲ့ တိရစ္ဆာန်ရုံ မရောက်ခဲ့ဘူး ပြောတာကို) ထောတော့ထောတယ် ဖုန်းကိုယ်စီနဲ့လေ
အမယ်လေး တနေရာနဲ့ တနေရာက အဝေးကြီး။ လမ်းရှင်းတာတောင် ဆိုင်ကယ်မောင်းတာ မိနစ် 20ကြာကြာ သွားယူရတယ်။ တုတ်တုတ်လဲ စောင့်မစီးချင်ဘူး ခရီးဖင့်မစိုးလို့ ။ ဘတ်စ်ကားကတော့ ရှိတယ်။ တွေ့မိတယ်(ကြာကြာနေတော့ တစ်ခါပေါ့) ဘတ်စ်မှတ်တိုင်မှာ စောင့်တဲ့သူကတော့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ နေကလဲ ပူမှပူ။ ဖုန်တော့မထူဘူး။ လမ်းမကြီးတွေက အကျယ်ကြီး ကောင်းမှကောင်း။ တို့များ ရန်ကုန်နဲ့တော့ ကွာပါ့။
မိုးတွေကလဲ ရွာသဗျ။ ခဏရွာပြီး တိတ်လိုက်။ တော်နေကြာ ခဏရွာလိုက်နဲ့။ လည်စရာတွေ ရှိတယ် ပြောပေမဲ့ မဖြူတဲ့ အသားတွေ ပိုမည်းကုန်မစိုးတာက တစ်ကြောင်း ဆိုင်ကယ် တက္ကစီခနဲ့ မွဲနိုင်တာကတစ်ကြောင်းနဲ့ လိမ်လိမ်မာမာပဲ အိပ်လိုက် စားလိုက် လုပ်ရင်း အချိန်တွေကုန်ပစ်လိုက်တယ်။
ညနေ 6နာရီမှာတော့ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီလာခေါ်လို့ မြို့မဈေးရောက် မိုးလေးကလဲ တဖျောက်ဖျောက်။ လမ်းမကြီးပေါ်က ဗွက်အိုင်တွေထဲ ဆိုင်ကယ်တရကြမ်းမောင်းလို့ ရေတွေကလဲ တဗွမ်းဗွမ်းနဲ့ ပျော်စရာကြီး။ မော်တော်ပီကယ်တွေလဲ အမြဲတမ်း duty ချိန်မှာ ကြိုးကြိုးစားစား တာဝန်ထမ်းနေကြသားပါလား။ အဲ… မြို့မဈေးမှာ ရောက်ရောက်ချင်း ရှမ်းခေါက်ဆွဲစား။ ကောင်းသဗျ။ ဈေးနှုံးတွေက သက်သာပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ အတူတူလောက်ပဲ။ ရန်ကုန်ကို ဖုန်းခေါ်တော့လဲ 100ပဲ ပေးရတယ်။ လက်ဖက်ရည်တို့ ရေသန့်တို့လဲ ဈေးအတူတူ။ မနက်က မိတ္တူကူးခလေးပဲ တစ်မျက်နှာ 100မလို့ ဈေးကြီးတယ်။ မြို့မဈေးထဲက ဆိုင်တွေ လျှောက်ပတ်ကြည့်ရတာလဲ ပျော်စရာကြီး။ တရုတ်တန်းလိုပဲ အစားအသောက်တွေကလဲ ပေါမှပေါ။ 7နာရီထိုးတော့ ကားပေါ်တက် 7နာရီခွဲမှာ နေပူတော်ကြီးကို နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ မီးတွေကလဲ ထိန်ထိန်ငြီးလို့။ အော် တို့ ရန်ကုန်နဲ့တော့ ကွာပါ့။
နေပူတော်ကိုမှတ်မိတာက မီးတိုင်တွေအများကြီးနဲ့ အ၀ိုင်းပတ်ကြီးရယ်၊ ဧည့်ရိပ်သာရှိတဲ့ သပြေကုန်းရယ်။ ရုံးတွေ ရှိတဲ့နေရာရယ်၊ မြို့မဈေးရယ် ပြီးတော့ ဟိုတယ်ဇုန်ရယ်။ အဟိဟိ ဒါဆို ဘာကျန်သေးလဲ(ဒါပဲ ရှိတယ်ထင်တာပဲနော်..)
လမ်းမှာ ရေတာရှည်မှာ နားတယ်။ နောက်တစ်နေရာနားတယ်။ မနက် 5နာရီမှာ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဂိတ်ကို ပြန်ရောက်လာတယ်။
ကဲ..ကျမ မယ်လိုဒီမောင်၏……ရဲ့ နေပူတော်သွား တောလားလေးကတော့ ဒီလောက်ပါပဲရှင်။
လေးဖြူ၏ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များ ရန်ပုံငွေ ဖျော်ဖြေပွဲ
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များ ရန်ပုံငွေအတွက် နာမည်ကြီးအဆိုကျော် လေးဖြူသည်
လာမည့် သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏအားကစားခန်းမ၌
Iron Cross (IC) အဖွဲ့သားများ၊ နာမည်ကြီး အဆိုတော်များဖြင့် တွဲဖက်၍
မုန်တိုင်းဒေသ ကလေးငယ် ၇ သိန်းနီးပါးအတွက် အကူအညီများ လိုအပ်နေ
အစားအစာအတွက် တန်းစီနေကြသည့် မုန်တိုင်းသင့်ဒေသက မြန်မာကလေးငယ်များ (မေလ ၁၂၊ ၂၀၀၈)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့တာ ၃ လနီးပါး ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရပြီး အသက်မသေ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးငယ် ၇၀၀,၀၀၀ အတွက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ လူမှုဘ၀ ရှင်သန်နိုင်ရေးတွေအတွက် အကူညီတွေ လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရံပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF က ပြောပါတယ်။
မုန်တိုင်းမတိုက်ခင်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေးငယ်တွေအတွက် ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေ မကောင်းတာကြောင့် အခုချိန်မှာ ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေ ပိုပြီးတော့ လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်၊ လုပ်ပေးဖို့ အခွင့်အလမ်းလည်း အခု ရှိနေတယ်လို့ UNICEF အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပက်ထရစ် မက် ကောမစ် (Patrick McCormick) က ပြောပါတယ်။
"အခုချိန်က ကယ်ဆယ်ရေးအဆင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးကာလပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးငယ်တွေနဲ့ သူတို့ မိသားစုတွေရဲ့ ဘ၀တွေ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆိုလိုတာက - ဒီကလေးငယ်တွေ အတွက် စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေ ဆောက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်တခါ ကလေးငယ်တွေကို ကာကွယ်ဆေးထိုးရေးကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မုန်တိုင်း မဖြစ်ခင်ကတည်းက မွေးကင်းစကလေးငယ် သေဆုံးမှုနှုန်းက များပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီလိုသေဆုံးမှု အများဆုံး နိုင်ငံထဲမှာ ပါတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာ ဒီကလေးငယ်တွေအတွက် ဆေးဝါး ထောက်ပံ့မှုတွေ၊ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု အစရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေ ပိုပြီးတော့ လုပ်ပေးရမှာပါ။ အရင်တုန်းက ဒီလိုမျိုး ကူညီဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ သိပ်မရှိခဲ့သလို အခုချိန်ဟာ ကျနော်တို့ဘက်က ကူညီနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အချိန်ပါ။"
မုန်တိုင်းကာလနောက်ပိုင်း ရောဂါဘယ ပြန့်ပွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်ရဆဲ ဖြစ်သလို ဒီအတွက် လတ်တလောမှာလည်း UNICEF အဖွဲ့က အကူအညီတွေ ပေးနေတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
"မုန်တိုင်းသင့်ဒေသမှာ ရောဂါဘယ ပြန့်ပွားနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေကို ကျနော်တို့ အထူး စိုးရိမ်နေတုန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း လိုအပ်တဲ့
ဆေးဝါးတွေကို ကျနော်တို့ ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်တွေ အစားအစာ အလောက်အလောက် မရတဲ့အခါမှာ အာဟာရ ချို့တဲ့ တဲ့ရောဂါ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ၊ တချို့တော့ ဖြစ်ပြီးသား အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအခါ ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုက ပိုပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေက ပြန့်ပွားတဲ့ ရောဂါမျိုးတွေပါ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က - ဒီကလေးငယ်တွေ သန့်ရှင်းတဲ့ သောက်သုံးရေ နဲ့ အစားအစာ ရရှိရေးအတွက် ကူညီထောက်ပံ့တာမျိုး ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ လုပ်ပေးတာတွေ လုပ်ပေးပါတယ်။ စိတ်ချလုံခြုံရတဲ့ နေရာလို့ ကျနော်တို့ခေါ်တဲ့ နေရာမျိုးတွေကိုလည်း မုန်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးချင်းကတည်းက ကျနော်တို့ တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ ဥပမာ - ကလေးငယ်တွေ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ကစားနိုင်တဲ့နေရာတွေ၊ မိဘတွေက ပျက်ဆီးခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ အိမ်ယာလယ်မြေတွေကို ပြန်ပြီးတော့ တည်ဆောက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ ကလေးငယ်တွေကို စိတ်ချလက်ချနဲ့ ထားခဲ့နိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေပါ။"
မုန်တိုင်းကြောင့် မိဘနှစ်ဦးစလုံး သေဆုံး၊ ဒါမှမဟုတ် အဖေ မဟုတ်ရင် အမေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ရဲ့စရင်းကို UNICEF အဖွဲ့က ပြုစုခဲ့သလို ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ မိဘဆွေမျိုး နောက်ကြောင်း အစဖော်နိုင်အောင် ကြိုးစားရှာဖွေပေးတာတွေနဲ့ လူမှုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေ လုပ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းလည်း သူက ပြောပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ UNICEF အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ၁၉၅၀ ခုနှစ်ကတည်းက စလုပ်ခဲ့တာဖြစ်သလို အခြေအနေတွေ အားလုံးကောင်းမွန်ပြီး
အကူအညီ လုံးဝ မလိုတော့တဲ့အချိန်အထိ လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် သိပ်ကို ဆင်းရဲတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုး ရောက်ဖို့ကလည်း မလွယ်ဘူးလို့ မစ္စတာ McCormick က ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့မေလ အစောပိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် လူနေအိမ် ၇၀၀,၀၀၀ ကျော်၊ ကျန်းမာရေး အဆောက်အဦ ၇၅ % နဲ့ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၄,၀၀၀ ကျော် ပျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ UNICEF အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလကုန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံက ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၉၀ ကျော် UNICEF က မကြာသေးခင်ကပဲ တောင်းခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယတွင် ပေါက်ကွဲမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီး လူအသေအပျောက်များပြား
Steve Herman Report in Burmese -
Ahmedabad မြို့က ပေါက်ကွဲမှု တနေရာ (ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၀၈)
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကွန်ပြူတာနည်းပညာ IT မြို့ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလောမြို့မှာ ဗုံးကွဲမှု အငယ်စားတွေ ဖြစ်ပြီး နောက်တနေ့မှာပဲ မနေ့ညနေပိုင်းကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ဖက်ခြမ်း စီးပွားရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Ahmedabad မြို့မှာ ဗုံးကွဲမှုတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂူဂျရတ် ပြည်နယ် မြို့တော် Ahmedabad မြို့တ၀ိုက် ပေါက်ကွဲမှု ၁၆ ခု ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့် အခုအချိန်အထိ လူပေါင်း အနည်းဆုံး ၂၉ ယောက် သေဆုံးသွားပြီး လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာ ရရှိထားတယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
တနေ့က ဘင်္ဂလောမြို့က အသေးစား ပေါက်ကွဲမှုလေးတွေက အပျက်အစီး အထိအခိုက် တွေကြားက သဲလွန်စတွေကို ထောက်လှမ်းရေး စုံစမ်းရေးမှုးတွေက လိုက်လံရှာဖွေနေချိန် - မနေ့ စနေနေ့ ညနေပိုင်းမှာပဲ အလားတူ ပေါက်ကွဲမှုမျိုးတွေ ဂူဂျာရက် ပြည်နယ်မြို့တော် Ahmedabad မှာ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ နယူးဒေလီမြို့ကနေ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် Steve Herman က သတင်းပေးပို့ပါတယ်။
ဘင်္ဂလောက ပေါက်ကွဲမှုတွေမှာ လူတဦးပဲ သေဆုံးခဲ့ပေမယ့်လို့ အခု Ahmedabad က ပေါက်ကွဲမှုတွေမှာတော့ လူအတော်များများ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပေါက်ကွဲပစ္စည်းတွေကို ထမင်းဗူးနဲ့ထည့်၊ စက်ဘီးတွေပေါ်တင်ပြီး အဲဒီစက်ဘီးတွေကို လူစည်ကားတဲ့ ဈေးတွေမှာ ထိုးထားရင်နဲ့ အခုလို ပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒဏ်ရာရထားသူ အချို့ကို ခေါ်ဆောင်ထားတဲ့ ဆေးရုံတခုမှာလည်း ဗုံးတလုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးဗုံး မကွဲခင် အချိန်ပိုင်းမှာပဲ အိန္ဒိယ မူဂျာဟစ်ဒင်လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အုပ်စုကနေ ၁၄ မျက်နှာရှိတဲ့ အီးမေး စာတစောင်နဲ့ တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတိပေးချက် သူတို့ ရရှိခဲ့တယ်လို့ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းဌာနတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ကိုတော့ အိန္ဒိယမှာ လူသိနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအဖွဲ့ဟာ အရင်တုန်းက အခြားမြို့တွေက ပေါက်ကွဲမှုတွေကို သူတို့လုပ်တာလို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
အိန္ဒိယပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Shivraj Patil ကတော့ အခု ဒီပေါက်ကွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် အကူအညီတွေ ဘယ်လိုမဆို လိုအပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မူဘိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေလီပဲဖြစ်ဖြစ် ဘင်္ဂလောပဲဖြစ်ဖြစ် အမာဒမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးရအနေနဲ့ တခုခုကို အပြစ်တင်ပုံချတာမျိုး လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလို အပြစ်တင်ရုံနဲ့ ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ဟိန္ဒြူဘာသာစကားနဲ့ ပြောသွားတာပါ။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ကာကွယ်မှုတွေ လုံလုံလောက်လောက် မလုပ်နိုင်တဲ့အပေါ် ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအကြား အပြန်အလှန် စွပ်စွဲထောက်ပြမှုတွေ ရှိနေတဲ့အပေါ် ရည်ညွန်းပြီး သူပြောခဲ့တာပါ။
အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် Manmohan Singh ကတော့ အိန္ဒိယပြည်သူတွေအနေနဲ့ တိုင်းပြည်အတွင်း လူမျိုးနွယ်စုတွေ ဘာသာကွဲတွေအကြား သဟဇာတ ဖြစ်အောင် နေထိုင်ကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ စိုးရိမ်ရတာကတော့ ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကို အစွန်းရောက် အစ္စလာမစ် အုပ်စုတွေ လုပ်တာလို့ စွပ်စွဲချက်တွေ ပေါ်လာမယ့်ကိစ္စပါ။ ဒီလို စွတ်စွဲရာကနေ လက်တုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ ဟိန္ဒြူဘာသာဝင် တွေအနေနဲ့ လူနည်းစုမွတ်ဆလင်တွေကို ပြန်လည် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပေါ်လာနိုင်ချေ ရှိတာကို စိုးရိမ်ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ဆိုရင် ဂူဂျရတ်ပြည်နယ်ဟာ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အထိအရှ ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်တုန်းက အဲဒီမှာ မွတ်ဆလင်နဲ့ ဟိန္ဒြူဘာသာဝင်တွေအကြား ရက်သီတင်းပတ် အတော်ကြာ အဓိကရုန်းတွေ ဖြစ်တာကြောင့် လူပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ် ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖနွမ်းပင်မြို့ လူထုစုဝေးပွဲတခုက ၀န်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်ဦးဆောင်သည့် CPP ပါတီ ထောက်ခံသူများ (ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၀၈)
နအဖ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက် ပုဒ်မများအရနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတိုင်း သံလွင်အရှေ့ဖက်ခြမ်း အပစ်ရပ် ၀တပ်ဖွဲ့ အထူးဒေသ ၂ နှင့် မိုင်းလား အပစ်ရပ်အထူးဒေသ ၄ အဖွဲ့တို့အား လက်နက်ဖြုတ် တပ်ရုပ်ရန် ဖိအားပေးရေးအတွက် အင်အားဖြည့် အသင့်ပြင်ထားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မိုင်းဆတ် မိုင်းတုံမြို့နယ်နှင့် ထိုင်းနယ်စပ် အကြားရှိ ၁၇၁ စစ်ဒေသ UWSA - ၁၀ တပ်ရင်းကျော်၊ တပ်မဟာ ၄၁၄၊ ၂၅၁၈ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ တစ်ခုလုံးနှင့် SSA-S သျှမ်းတပ်တို့အား ရင်ဆိုင်ရန်လည်း စစ်ရေးပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း - သျှမ်းခေါင်းဆောင်အချို့ သုံးသပ်ကြ၏။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/26/20086အကြံပြုခြင်း
ဒို့ခေတ်ကြမှ ညံ့ကြတော့မှာလား ...
ရွှေလီမြို့မှာ တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး အနေနဲ့ အခုလ...
Dagon Net တောလား Dagon အေးဓါးပြတိုက်မှု Jul 26th, 2...
စနေသတင်းများမုန်တိုင်းဒေသ ကလေးငယ် ၇ သိန်းနီးပါးအတွ...